Qooje oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab – Radio Baidoa
Taliyaha Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Janeraal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje ayaa sheegay in dhawaan degaannada Galmudug ay ka bilaaban doonaan howlgallo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab.
Taliyaha oo la hadlay Idaacadda Voa-da ayaa ku hanjabay inay cagta marn doonaan dhamaan Xubnaha Shabaab ee ku sugan degaannada Galmudug,isla markaana Galmudug ay soo martay waqti adag balse laga soo gudbay.
Sidoo kale Taliyaha waxaa uu sheegay in xilligaan aysan Al-Shabaab laheyn awood ay isaga difaaci karaan Al-Shabaab,isla markaana uu rajeynayo in Ciidamada dowladda Soomaaliya ay waqti dhow ka saaraan Al-Shabaab degaannada ay kaga sugan yihiin Galmudug.
Waxaa uu hadalkiisa intasi ku daray taliyaha in howlgallo maalmihii la soo dhaafay ay Ciidamada ka sameeyeen degaanno ka tirsan Galmudug ay kusoo qabteen qaraxyo iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo uu sheegay inay dhawaan Maxkamad soo saari doonaan.
labadii todobaad ee la soo dhaafay ayaa waxaa degaano ka tirsan Galmudug ka socday howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab,hayeeshee shalay gelinkii hore ay weerar gaari qaraxyo laga soo buuxiyay loo adeegsaday ay ku qaadeen Xerada Ciidamada qeybta 21aad ay ku leeyihiin degaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug.
Aaden Barre oo laga qaaday xil uu ka hayay Kenya